トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Nezvengozi wokurarama chikwereti
Wokurarama chikwereti yave kushandisa hurongwa kuramba kubhadhara imwe mari kuti iwe tsanangurai mumwe mwedzi, pane kubhadhara nomumwe zvinhu zvakadai Yakabudiswa, mumwe mwedzi yose mari yakashandiswa kushandisa Somuenzaniso, kadhi ichi hurongwa kupedza muripo nokuda muripo. In
Yakabudiswa, asi tichaisa mari vakabatsirana nomumwe chikwereti, nokuti wokurarama chikwereti zvichaita chete kubhadhara munhu wakaiswa mari, asi chaizvo nyore, panewo ngozi Ukuwo.
bhuku | kunge ambopupura ave pangozi Usakanganwa
wokurarama chikwereti kuti wokurarama chikwereti uye musiyano
wokurarama chikwereti Yakabudiswa ari chikwereti zvakanaka, kunyange kana nhamba iri uwandu nokukwereta nokuti mutsividzo yakawandisa kugara pasina shanduko mwedzi wose, ndiko kuuya nani kuziva kuti of facto chikwereti. Uye hwave mupenyu, anobuda zvinhu zvinofanira kubhadharwa pamwedzi.
Magetsi nemvura, akadai rendi uye mvura bhiri kana yemagetsi bhiri, zvakadai somunhu Mobile runhare mirairo Masu anga and said ataurwa, asi izvi hazvisi muzvikwereti. Mutoro achazadzisa kana akabhadhara mwedzi woga. For
wokurarama mbiri chikwereti, asi hamuna zvachose kuti mari yakatarwa pamwedzi iri deducted, zvichaitika kuti achapiwa kuvhiringidzwa muripo, akadai pamwe Magetsi nemvura uye rendi. Uyezve, nguva mutsividzo uye nokukwereta inowedzera zvichava refu. Uye akaramba mungoro mu wokurarama zvikwereti, iyo yakakura yechimbadzo mari rakumbirwa. Paaifunga kuti chikwereti apera, zvichava zvishoma nezvishoma kuchaguma kuti mubereko ari kuwedzera.
zvakasimba kunzwisisa pamusoro mari kushandisa nengaidzo kubhadharwa
Uyezve, zvakaoma kuziva yaipedzerwa kubhadharwa, munewo mashoko kana manzwiro zvakaoma kuva mari yechimbadzo yakawanda sei zvino. Saka zvakawanda zvakare nokukwereta pamusoro vachibhadhara, vachifunga kuti mari chete kufarira, hazvizovi kuchiderera chaiko wechikoro.
Kutaura zvazviri, vakawanda vanowira zvikwereti akawanda ari wokurarama zvikwereti pasuo Zvave ambopupura kuti pane vazhinji kuti muri kukwira nenzwi kuti akabvunza mune vamwe. Consumer mari, inonzi Sarah goridhe, maitiro inopiwa kuti yaipedzerwa nokudzorwa amboshandurirwa Mari Lending Business Law, zvinhu zvakadai kuti imwe nguva pasocial dambudziko yave kudziviswa. Shopping chakafanana
makadhi havasi pasi mutemo of Money Lending Business Law. Chikwereti kuti havachakwanisi kukwereta pedyo Mari Lending Business Law, uchishandisa wokurarama chikwereti puranga riri kadhi, uyewo kwakaitika zvinhu kuchaita kuti haana kukunda chemhosva.
bhuku | kutakura-pamusoro ari wokurarama chikwereti nepakati, kufarira
wokurarama mbiri mwero
wokurarama chikwereti wegore negore ndiyo nengaidzo mukuru kunhivi 2000, zvino divi-ne-divi pagore chimbadzo 15% mune zvinenge dzose kambani. Izvi mari pasi Capital Subscription Mutemo iri pamutemo hwaro. Uye akawedzeredzwa mienzaniso yakananga, somuenzaniso, sezvo pane pakuenzanisa wokurarama chikwereti kubva 500,000 Yen, uye gore negore chimbadzo 15%, kuti kufarira zvakapararira mugore rimwe achava 75,000 Yen.
uyu haaripi iri wokurarama chikwereti mumwe mwedzi 5,000 Yen, pane chikwereti haazorambi, acharamba kuwedzera zvisizvo. Mari kuti vawedzere izvi pamwedzi 10,000 Yen, nokuripira nhamba 79 nguva mune mamwe manzwi zvinotora 6 makore 7 months, chemhosva uwandu achava 789.500 Yen mu yose. Uyewo, kana uchifarira kunotenga idzva wokurarama zvikwereti mukuwedzera, izvozvo achatambanudza chemhosva nguva mberi.
bhuku | talk kufarira (komisheni), kufarira prices
wokurarama chikwereti kuti wokurarama zvikwereti iri, kubatsira chaizvo kana ukashandisa kwazvo, kushandiswa mutengo pane kumusoro. Kana chikwereti kambani wepagore muripo kusunungura mumakore achangopfuura, tava unoratidzwa kukurumbira, somuenzaniso, ipai zvinobatsira mupfumi, asi ngatirege kukanganwa kuti vaya vane ngozi Mwero.
bhuku | kuti wokurarama chikwereti ngozi System inopiwa kuti masimba, zvinhu zvakadai kuti imwe nguva pasocial dambudziko yave kudziviswa. Shopping chakafanana
wokurarama zvikwereti pagore ndiyo nengaidzo mukuru kunhivi 2000, zvino divi-ne-divi pagore chimbadzo 15% mune zvinenge dzose kambani. Izvi mari pasi Capital Subscription Mutemo iri pamutemo hwaro. Uye akawedzeredzwa mienzaniso yakananga, somuenzaniso, sezvo pane pakuenzanisa wokurarama chikwereti kubva 500,000 Yen, uye gore negore chimbadzo 15%, kuti kufarira zvakapararira mugore rimwe achava 75,000 Yen.
makadhi havasi pasi mutemo of Money Lending Business Law. Chikwereti kuti havachakwanisi kukwereta pedyo Mari Lending Business Law, uchishandisa wokurarama chikwereti puranga riri kadhi, uyewo kwakaitika ezvinhu kusingadzokeri kukunda chemhosva.
wokurarama chikwereti kuti wokurarama zvikwereti iri, kubatsira chaizvo kana ukashandisa kwazvo, kushandiswa mutengo pane kumusoro. Kana chikwereti kambani wepagore muripo kusunungura Mumakore achangopfuura, tava unoratidzwa kukurumbira, somuenzaniso, ipai zvinobatsira mupfumi asi ngatirege kukanganwa kuti vaya vane ngozi Mwero.
bhuku | kuti wokurarama chikwereti ngozi Te, uyewo zvaitika zvinhu kuchaita kuti haana kukunda chemhosva.
bhuku | kuti wokurarama chikwereti ngozi Ko vanobhadharwa vari wokurarama chikwereti romwedzi 5000 Yen, ndoda havachaoni chikwereti, icharamba ichiwedzera zvisizvo. Mari kuti vawedzere izvi pamwedzi 10,000 Yen, nokuripira nhamba 79 nguva mune mamwe manzwi zvinotora 6 makore 7 months, chemhosva uwandu achava 789.500 Yen mu yose. Uyewo, kana uchifarira kunotenga idzva wokurarama zvikwereti mukuwedzera, izvozvo achatambanudza chemhosva nguva mberi.
bhuku | kuti wokurarama chikwereti ngozi